यी मोडलले साजिद खानलाई लगाईन यस्तो गम्भीर आरोप! - Bigul News
यी मोडलले साजिद खानलाई लगाईन यस्तो गम्भीर आरोप!
भदौ ३०, २०७७ SLPA
२०१८ सालमा चलाईएको मीटू मूवमेंटमा डायरेक्टर साजिद खानमाथि ३ महिलाको यौ-न शो’षणको आरोप लगाईएको थियो। त्यसपछि साजिदलाई ‘ हाऊसफूल ४’ को डायरेक्शनसँग पनि लड्नु परेको थियो। अब साजिद खानमाथि मोडल पाउलाले पनि यौ-न शो’षणको आरोप लगाएकी छन्। मोडलले इंस्टाग्राममा एक लामो पोस्ट गरेर यौ-न शो’षणको कुरा खुलासा गरेकी थिइन्।
मोडल पाउलाले इंस्टाग्राममा लेखेकी छिन्,”मीटू मूवमेंटको क्रममा म चुप रहे, किनकी इंडस्ट्रीमा मेरो कोहि पनि गडफादर थिएन।’ आफ्नो फ्यामिलीको लागि उनको काम गर्न जरूरी थियो । अब पाउलाको आमाबुवा संगै छैनन्। त्यसैले अहिले उनी निर्देशक साजिद खान विरुद्द बोल्न सक्छिन्। पाउलाले लेखिन् ,”अब ममा हिम्मत आएको देख्न सक्छु र बताउन चाहन्छु कि जब म १७ वर्षको थिए साजिद खानले मलाई शो’षण गरेका थिए ।’
पाउलाले साजिद खानमाथि आरोप लगाउदै लेखिन,’ उसले मसँग नराम्रो कुरा गर्थे। मलाई छुने कोसिस गर्थे। यति मात्र नभई उनले मलाई अगाडी कपडा बदल्न पनि भने। यदी मैले त्यस्तो गरे भने उनले मलाई आउने फिल्म ‘हाउसफुल’ मा रोल दिने कुरा भने । भगवानलाई नै थाहा होला उनले कति केटिलाई यस्तो गरे।’
प्रकाशित : मङ्गलबार, भदौ ३०, २०७७१०:०६